Malakia – 2trondro
Home / Baiboly / Testamenta Taloha / Malakia
1:1 Faminaniana ny tenin'ny Tompo ho amin'ny Isiraely izay nampitondrainy an'i Malakia.
1:2 Efa tia anareo Aho, hoy Jehovah, ary hoy ianao:, "Nahoana no lazaina fa ianao tia antsika?"Tsy Esao rahalahin'i Jakoba, hoy Jehovah? Ary no tsy tia an'i Jakoba,
1:3 fa natao ho an'i Esao fankahalana? Ary nasiako ny tendrombohitra tamin'ny irery, ary ny lovany tamin'ny bibilava ny any an-efitra.
1:4 Fa raha Edoma hanao hoe:, "Tsy efa nofongorana, fa rehefa miverina, dia hanangana izay efa rava izay,"Izao no lazain'i Jehovah, Tompon'ny maro,: Dia hanangana, ary Izaho handrava. Ary hantsoina hoe "Ny fetran'ny impiety,"Ary, "Ny olona izay tian'i Jehovah no tezitra, hatramin'ny mandrakizay. "
1:5 Ary ny masonao hahita. Ary ianao dia hanao hoe, "Enga anie ny Tompo hankalazaina anie any an-dafin'ny fetran'ny Isiraely."
1:6 Ny zanaka manaja ny rainy, ary ny mpanompo ny tompony. Raha, noho izany, Izaho no Ray, Aiza ny voninahitra? Ary raha Tompo aho, aiza izay tahotra Ahy? hoy Jehovah, Tompon'ny maro, ho anao, ry mpisorona, izay manamavo ny anarako. Ary ianao efa nilaza, "Ahoana no, no anamavoanay ny anaranao?"
1:7 Ianao Amin'ny fitondrana hanina voaloto eo amin'ny alitarako, ka hoy ianareo:, "Ahoana no, no andotoanay Anao?"Amin'ny fanaovanareo hoe, "Ny latabatry ny Tompo dia tsinontsinona."
1:8 Raha manatitra ny jamba ho sorona, izao tsy ratsy? Ary raha mandringa sy ny marary, izao tsy ratsy? Manolotra izany ny mpitarika, raha ho faly izany, na raha hanaiky ny tavanao, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,.
1:9 Ary ankehitriny, mangataka ny tavan 'Andriamanitra, mba hamindra fo aminao (fa ny tananao no nanao izany no) raha, amin'ny fomba rehetra, mba hanaiky ny tarehy, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,.
1:10 Iza moa aminareo izay hanakatona ny varavarana sy ny alitara enflame tsy misy karama? Aho, tsy nisy famindrampo ao anatinareo, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,. Ary tsy hanaiky ny fanomezana avy amin'ny tananareo.
1:11 Fa, avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatrany amin'ny filentehany, ny anarako lehibe any amin'ny jentilisa, ary amin'ny toerana rehetra, madio ho fanatitra hohanina dia namono zavatra hatao fanatitra, ary nanolo-kevitra ny anarako. Fa lehibe ny anarako any amin'ny jentilisa, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,.
1:12 Ary efa nandoto azy, Amin'ny fanaovanareo hoe, "Ny latabatry ny Tompo efa voaloto; ary izay apetraka eo dia tsinontsinona, ampitahaina amin'ny afo izay mandevona azy. "
1:13 Ary ianao efa nilaza, "Indro ny asa,"Ary efa exhaled izany izy, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,. Ary nentinao tao amin'ny babo ny mandringa, ary ny marary, dia nentiny ho ao toy ny fanomezana. Ahoana no ahafahako mandray izany avy amin'ny tananareo, hoy Jehovah?
1:14 Voaozona ny fitaka, izay mihazona ao amin'ny ondriny lahy, ary, rehefa manao voady, manolotra ho sorona izay mila ho reraka ho an'ny Tompo. Fa izaho koa mba Mpanjaka lehibe, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,, ary ny anarako dia mahatahotra any amin'ny jentilisa.
2:1 Ary ankehitriny, ry mpisorona, io didy io dia ny anao.
2:2 Raha mandà tsy hihaino, Ary raha mety mandray izany am-po, ka hanome voninahitra ny anarako, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,, Dia halefako hamely anareo fahoriana, ka hozoniko ny fitahiana; Eny, Dia hanozona azy. Fa hianao tsy nitondra am-po.
2:3 Indro, Dia hariana any sandrin'ny anao, Dia haeliko ho any manerana ny tavanao ny tain-droroha avy ny fotoam-pivavahana, ary dia hitondra anareo ho tena.
2:4 Ary ho fantatrareo fa Izaho naniraka anareo ity didy ity, ka ny fanekeko amin'i Levy mety ho, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,.
2:5 Ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana ho. Ary nomeko azy ny tahotra, ka dia natahotra Ahy, ary izy dia raiki-tahotra eo anatrehan'i anarako.
2:6 Ny lalàn'ny fahamarinana no teo am-bavany, ary ny ratsy tsy hita teo amin'ny molony. Ary niara-nandeha tamiko tamim-piadanana sy tsy mivadika, Ary niala maro amin'ny heloka.
2:7 Fa ny molotry ny mpisorona no hitahiry fahalalana, ka hangataka ny lalàna avy amin'ny vavany, satria ny anjelin 'ny Tompo, Tompon'ny maro,.
2:8 Fa efa niala an-dalana, ary efa izay nanafintohina betsaka teny amin'ny lalàna. Efa foanana ny fanekena amin'i Levy, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,.
2:9 Noho io, Izaho kosa dia efa nanolotra anareo ho fanazimbazimba sy mietry tamin'ny olona rehetra, tahaka ny tsy nanompo ny lalako, ary ianao efa nanaiky ny tarehiny ao amin'ny lalàna.
2:10 Misy iray akory aza Raintsika rehetra? Tsy Andriamanitra iray ihany hamorona antsika? Nahoana, avy eo, no tsirairay amintsika tsinontsinona ny rahalahiny, mandika ny fanekena tamin'ny razantsika?
2:11 Joda nivadika, sy ny fahavetavetana no nataony ao amin'ny Isiraely sy ao Jerosalema. Fa ny Joda efa nandoto ny nohamasinina avy amin'ny Tompo, izay tiany, ary efa natao ny zanakavavin'ny andriamani-kafa.
2:12 Ny Tompo dia hampiala ny olona izay efa nanao izany, na ny mpampianatra sy ilay mpianatra, avy ny lain'ny Jakoba sy avy amin'ireo manolotra fanomezana ho an'i Jehovah, Tompon'ny maro,.
2:13 Ary ianao efa nanao izany imbetsaka: efa nanarona ny alitaran'i Jehovah-dranomaso, ny fitomaniana sy ny bellowing, ny toy izany hatraiza fa tsy manana fanajana manoloana ny sorona, na no manaiky izay fitoniana izay avy any tananao.
2:14 Ary ianao efa nilaza, "Inona no antony ity?"Izany dia satria ny Tompo no vavolombelona ny aminao sy ny vadin'ny fahatanoranao, izay efa nanala-baraka. Nefa izy ny mpiara-miasa, ary ny vady ny fanekena.
2:15 Iray Tsy hanala baraka azy, ary izy tsy ny sisa ny fanahiny? Ary inona no olona hitady, afa-tsy naterak 'Andriamanitra? Koa dia, hiaro ny fanahinao, ary aza manamavo ny vadin'ny fahatanoranao.
2:16 Raha te hihazona ny fankahalana, handroaka azy, hoy Jehovah, ny Andriamanitry ny Isiraely,. Fa ny ratsy kosa handrakotra ny lambany, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,. Hiaro ny fanahinao, ary aza vonona ny hanao tsinontsinona.
2:17 Efa manasatra an'i Jehovah amin'ny teninareo, ary hoy ianao:, "Ahoana no, dia efa nanasatra azy?"Amin'ny fanaovanareo hoe, "Izay rehetra manao ratsy dia tsara eo imason 'ny Tompo, ary toy izany mampifaly azy,", Na azo antoka, "Aiza ny Andriamanitry ny fitsarana?"
3:1 Indro, Izaho maniraka ny anjely, ary izy hanamboatra lalana eo ny tavako. Ary ankehitriny ny Tompo Fara Tampony, izay mitady, ary ny anjely ny fijoroana ho vavolombelona, izay maniry, dia ho tonga amin'ny amin'ny tempoliny. Indro, dia manatona, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,.
3:2 Ary iza no ho afaka mandinika ny andro ny fiaviany, ary iza no hitoetra mafy mba hahita azy? Fa Izy dia tahaka ny fanadiovana ny afo, ary tahaka ny zava-maniry ny feno kokoa.
3:3 Ary hipetraka fanadiovana sy manadio ny volafotsy, dia hanadio ny taranak'i Levy, ary Izy no hanangona azy toy ny volamena sy volafotsy, ary dia hamono zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehovah eo amin'ny fitsarana.
3:4 Ary ny sorona Joda sy Jerosalema dia hahafaly ny Tompo, toy ny tamin'ny andro lasa taranaka, Sy tahaka ny tamin'ny fahiny taona.
3:5 Ary Izaho kosa dia hanatona anareo amin'ny fitsarana, ary Izaho ho vavolombelona faingana hanameloka ny ratsy fanahy, sy ny mpaka vadin'olona, ary perjurers, ary satria izay mametsy ny mpikarama amin'ny karamany, ny mpitondratena sy ny kamboty, ary izay mampahory ny lalana, ary izay tsy natahotra ahy, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,.
3:6 Fa Izaho no Jehovah, ary tsy miova. Ary ianao, ny zanak'i Jakoba, tsy mbola lany ritra.
3:7 Fa, hatramin'ny andron'ny razanareo, efa niala ny fitsipiko, ka tsy nitandrina azy. Miverena amiko, ary izaho dia hiverina aminao, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,. Ary ianao efa nilaza, "Ahoana no, ary no ho fiverinay?"
3:8 Raha misy olona hampahory Andriamanitra, dia tena mampahory ahy. Ary ianao efa nilaza, "Ahoana no, isika no mampahory anao?"Amin'ny fahafolon-karena sy ny voaloham-bokatra.
3:9 Ary ianao no voaozona amin'ny fihafiana, ary tena hampahory ahy, na dia ny olona manontolo.
3:10 Ento ny fahafolon-karena rehetra ho ao an-trano firaketana, ary aoka hisy sakafo ao an-tranoko. Ka fantaro ny momba izany, hoy Jehovah, raha toa dia tsy hisokatra ho anareo ny vavahadin-dranon'ny lanitra, ka haidiko aminareo ny tso-drano, rehetra ny fomba be dia be.
3:11 Ary hasiako teny mafy noho ny aminareo ny valala, ka tsy hanimba ny vokatry ny tany. Ary tsy ny voaloboka any an-tsaha ho momba, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,.
3:12 Ary ny firenena rehetra dia hataony hoe sambatra ianao. Fa ho tany mahafinaritra iray, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,.
3:13 Ny teninareo dia nanangona hery ahy, hoy Jehovah.
3:14 Ary ianao efa nilaza, "Inona no resakay nentinay namely Anao?"Hoy ianao, "Isasarany foana izay manompo an'Andriamanitra,"Ary, "Inona no soa ho azontsika, raha nitandrina ny didiny, sady nilaza fa tsy mandeha sorrowfully teo imason'i Jehovah, Tompon'ny maro,?
3:15 Noho izany, isika izao dia midera ny mpirehareha sambatra, toy ny hoe ireo izay miasa impiety efa naorina ny, ary toy ny hoe efa naka fanahy an'Andriamanitra izy ireo, ary voavonjy. "
3:16 Ary izay matahotra ny Tompo niteny, samy amin'ny namany. Ary ny Tompo nihaino ka nihaino. Ary nisy boky fahatsiarovana nosoratana teo imasony, ho an'ireo izay matahotra ny Tompo sy ho an'ireo izay mihevitra ny anarany.
3:17 Ary izy no ho fananany manokana, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,, tamin'ny andro zavatra. Ary ho antra azy Aho, toy ny olona antra ny zananilahy izay manompo azy.
3:18 Ary ianao dia hiova fo, ary ho hitanareo ny maha samy hafa ny marina sy ny ratsy fanahy, ary izay manasaraka ireo izay manompo an'Andriamanitra sy izay tsy manompo Azy.
4:1 Fa, indro, ny andro ho tonga, nirehitra toy ny lafaoro, ary ny mpirehareha rehetra sy ireo rehetra izay manao impiously dia ho vodivary. Ary ny andro manatona dia andro ka ampirehetin'ny, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,; dia mandao ho azy ireo na ny fakany, na ny tsimoka.
4:2 Fa aminareo, izay matahotra ny anarako, ny Masoandro ny rariny dia hitsangana, ary fahasalamana ho ao ny elany. Ary ianao dia handeha sy mitsambikina tahaka ny ombivavy kely ao ny omby.
4:3 Ary dia hanosihosy ny ratsy fanahy, raha mbola ho lavenona eo ambany ny faladianao, tamin'ny andro zavatra, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,.
4:4 Tsarovy ny lalàn'i Mosesy mpanompoko, izay nandidiako azy any Horeba ho an'ny Israely rehetra, ny didy sy ny fitsipika.
4:5 Indro, Hirahiko ho aminareo Elia mpaminany, talohan'ny ny fahatongavan'ny ny lehibe sy mahatahotra andron'i Jehovah,.
4:6 Ary hampiala ny fon'ny ray ho amin'ny zanany, ary ny fon'ny zanak'olombelona ny razany, fandrao ho avy Aho hamely ny tany amin'ny voaozona.